अर्थ / वाणिज्य Archives - Page4of 48 - Online Majdoor
काठमाडौँ, २१ फागुन । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला रू. दुई हजार २०० ले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्का अनुसार बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ८० हजार ५०० पुगेको छ । यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ८० हजार २०० निर्धारण गरिएको छ । महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार छापावाल सुन प्रतितोला रू. ७८ हजार ३०० […]
– झलनाथ खनाल भजनी, २० फागुन । यतिबेला कैलालीको भजनी क्षेत्रका किसानलाई चैते धानको ब्याड राख्ने चटारोले छोएको छ । बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको भजनी नगरपालिका– ३, ५, ७ र ८ का किसानले चैते धानबाट जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन् । वर्षातको समयमा काँढा, कन्द्रा, पथरैया, मोहना नदीमा आउने बाढी र डुबानले लगाएको धान बगाउने र डुबाउने […]
– विमलबहादुर विष्ट डोटी, १९ फागुन । जिल्लामा वर्षौं पहिलेदेखि निर्माण हुने भनिएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म बन्ने छाँटकाँट नदेखिँदा उक्त क्षेत्रका दजनौँ गाउँमा विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । गाउँमा विकास नहुँदा स्थानीयवासीलाई निकै सकस हुन थालेको छ । पश्चिम सेती बने निर्माण भएका विकास निर्माणका काममा अवरोध हुने तथा गाउँपालिकाको लगानीसमेत खेर जाने […]
– सुरेश झा हेटौँडा, १९ फागुन । नेपालमा कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये करिब ८१ हजार हेक्टर जमिनमा उखु खेती हुने गरेको छ । विश्वमा उखु उत्पादन गर्ने राष्ट्रमध्ये ३३ औँ स्थानमा नेपाल रहेको छ तर यस्तो अवस्थामा पनि उखु खेती फस्टाउन सकेको छैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम जितपुरका अनुसार आव २०७४।०७५ मा नेपालमा […]
असिनाले हिउँदे बाली नोक्सानीः किसान चिन्तित
डोटी, १८ फागुन । जिल्लाको पूर्वीचौकीमा शनिबार साँझ एक्कासि परेको असिनाले खेतबारीमा लगाइएको गहुँ, जौ, तोरी तथा तरकारी बालीलगायत अन्य बालीमा ठूलो मात्रामा नोक्सानी पु¥याएको छ । पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खड्काले भन्नुभयो, Fसाँझ एकाएक परेको असिनाले यहाँका गहुँ, जौ, तोरी र तरकारीबाली पूरै सखाप पा¥यो ।” सो गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीले करिब आधा घण्टा असिना […]
नक्कली बीउ पीडित किसानलाई २० प्रतिशतमात्र राहत
चितवन, १७ फागुन । धानको नक्कली बीउका कारण पीडित बनेका कृषकलाई सरकारले लागत मूल्यमा २० प्रतिशत राहत दिने भएको छ । गरिमा जातको नक्कली बीउले धान पाक्ने बेलामा बाला नै नलागेपछि चितवनसहित १३ जिल्लाका किसानले यस वर्ष धानखेतीमा क्षति व्यहोरेका थिए । ती जिल्लाका १७ हजार ८०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानका कारण रु. १७ करोड बराबरको लागत खर्च […]
मकै खेतीमा युवाको आकर्षण न्यून
फिदिम, १७ फागुन । कृषि ज्ञान केन्द्रले मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पाँचथरमा १३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा विशेष कार्यक्रम लागू गरेको छ । मकैको सघन उत्पादनका लागि तीन प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको हो । जिल्लाको तुम्बेवा गाउँपालिकाको २०० रोपनी क्षेत्रफलमा मकैको पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । पकेट क्षेत्र कार्यक्रममा कृषकलाई उन्नत जातिको मकैको बीउ, मल, मकै खेतीका लागि […]
रमेश लम्साल काठमाडौँ, १५ फागुन । सरकारको पछिल्लो विवरणअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति असाध्यै सुस्त छ । कुल विनियोजित रु. एक खर्ब बजेटमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म मात्रै २० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । लामो समयदेखि अगाडि बढाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण प्रगति प्रभावकारी नहुनाका विभिन्न कारण रहेका छन् । त्यसमा निर्माण व्यवसायीको कार्यशैली तथा कमजोर आयोजना […]